Allgedo.com » Prof. Jawaari oo digniin xoogan u diray Wariyeyaasha Soomaaliyeed “Akhri Digniinta”
Prof. Jawaari oo digniin xoogan u diray Wariyeyaasha Soomaaliyeed “Akhri Digniinta”
Print here| By: allgedo.com: Tuesday, December 11, 2012 // 2 Jawaabood
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa shaaca ka qaaday in wariyayaasha Soomaaliyeed ay waqtiyada qaar galaan Dambiyo, isagoo sheegay in lala xisaabtami doono.
Jawaari ayaa hadalkan ka sheegay fadhigii Baarlamaanka ee Maanta, kaasoo ay fadhiyeen wasiirka Gaashaandhiga Fiqi iyo Wasiirada arimaha dibada Soomaaliya Marwo Fowziyo Yuusuf.
Waxaa uu qiray in saxafiyiinta xiliyada qaar ay galaan dambiyo, wuxuuna si cad u sheegay inaan loo dulqaadan doonin oo lala xisaabtami doono wariye kasta oo qora ama baahiya wax been ama qalad ah.
Wuxuu shaaca ka qaaday in ay sameyn doonaan Gudi la socon doona qaladaaadka Saxafiyiinta, isagoo xusay in saxafigii qalad gala lala istaagi doono maxkamad.
Ugu dambeyna, Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa wariyayaasha ugu baaqay inay ka dheeraadaan wax yaabaha keeni kara dagaalka ama qaladaadka, maadaama wixi hada ka dambeeya lala xisaabtami doono.
2 Jawaabood " Prof. Jawaari oo digniin xoogan u diray Wariyeyaasha Soomaaliyeed “Akhri Digniinta” "
keerow Eyle says:
Arreey Ninkaan ma waashey mise horey ayuu u waalnaa?
Ma wuxuu cabburin rabaa Xuquuqda Saxafiyiinta iyo Saxaafadda ?
Walle Afrikaan kama tanasulo Dikteetarnimo iyo awood sheegasho.
awalan asxaabta salaan sare prof. jawaari waxaan ujeedinayaa mahad naq balaaran waxaan soo dhaweynayaa fikirkiisa saliimka ah waayo saxafiga mid xun baa ku jira faa fiyana xumaanta daboolana wanaaga waxay ubaahantahay midaa dabagal balaaran si loo helo hal af wabilaahi towfiiq